Ukuduma kweHype 2 ye-OSX: Yenza kwaye uphilise i-HTML5 | Martech Zone
Ukuduma kweHype 2 ye-OSX: Yenza kwaye uphilise i-HTML5
NgoLwesibini, Agasti 20, 2013 NgoLwesine, Meyi 8, 2014 Douglas Karr
Uhlobo lweHum sisicelo seMac OS X esikuvumela ukuba wenze umxholo onxibelelanayo kunye noopopayi kumxholo wewebhu we-HTML5. Amaphepha akhiwe ngomsebenzi weHumult Hype kwiidesktops, ii-smartphones kunye nee-iPads ngaphandle kokufaka iikhowudi. Unga thenga ikopi yeTumult Hype 2 kwiVenkile yeApp kude kube ngu-10 kuSeptemba nge $ 29.99!
Inguqulelo yeHype (Mac OS X) ineempawu ezinomdla kunye nezisebenzisanayo, kubandakanya:
Oopopayi Inkqubo yoopopayi esisiseko esekwe kwiHumult Hype izisa umxholo wakho ebomini. Cofa irekhodi kunye neHumult Hype ibukela yonke intshukumo yakho, yenza ngokuzenzekelayo amagama aphambili njengoko kufuneka. Okanye, ukuba ukhetha ukuba nezandla ezingaphezulu, kongeza ngesandla, susa, kwaye uphinde ulungelelanise amagama aphambili kulungelelwaniso lomxholo wakho. Kulula ukwenza amagophe endalo ngokunqakraza kunye nokutsala kwindlela yentshukumo yento yokongeza amanqaku olawulo lwe-bézier.
Ixesha lojongano loPhilayo Amaxesha omdlalo anokongezwa kwaye adlale xa kubangelwa zizenzo. Olu lwazi lukuvumela ukuba ungeze unxibelelwano - ukukroba ngaphezulu kwento kunokubangela ixesha lokudlala elidlala ezinye izinto kwindawo.
Jonga ngakumbi kumaxesha abekiweyo.
Imifanekiso -Imifanekiso iyafana nesilayidi kwisoftware yokubonisa, kwaye ziyindlela elungileyo yokwenza lula ukuhamba kweopopayi okanye umxholo owahlukileyo. Uhlobo lweHumult Hype lukuvumela ukuba wenze izigcawu ezininzi njengoko kufuneka, kwaye izinto ezininzi ezinokutshintsha phakathi kwezigcawu zisebenzisa utshintsho olungenampazamo.
Ukuhlaziywa: Enkosi kuWilliam Winter waseBradenton.com ngengcaciso yokuba sisixhobo seMac OSX, hayi usetyenziso lwe-iOS!
tags: appapilePhuhlisohtml5Hype mac os xiOSIMACOSXisoftweamxesha
Agasti 27, 2013 kwi-10: 21 AM
IHype 2 ye-Mac OS X, hayi iOS. Kukho i-app yeqabane le-iOS elisebenza nayo.
Agasti 27, 2013 kwi-10: 34 AM
Enkosi @wwinter: disqus! Ndiye ndalihlaziya eli nqaku kwaye ndongeza umbulelo.